मेस्सीलाई ग्रिजम्यानले दिए चुनौती ! - Koshi Online
मेस्सीलाई ग्रिजम्यानले दिए चुनौती !
एजेन्सी, पुस ३०
एथ्लेटिको मड्रिडका खेलाडी एन्टोइन ग्रिजम्यानले बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेस्सीलाई चुनौती दिइरहेका छन् । फ्रान्सलाई रसिया विश्वकपको उपाधि दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका ग्रिजम्यानले क्लबको प्रदर्शनको विषयमा मेस्सीलाई चुनौती दिएका हुन् ।
हाल ग्रिजमान एक्लैले एथ्लेटिको मड्रिडलाई ला लिगाको दौडमा लिएर गइरहेका छन् । ग्रिजमान उत्कृष्ट प्रदर्शनकै कारण एथ्लेटिकोले बार्सिलोनालाई पछ्याइरहेको छ ।
बार्सिलोना जान अस्वीकार गरेका ग्रिजमानले बार्सिलोनाको उपाधि दौडलाई असर गर्न सक्ने प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा आफूलाई उभ्याएका छन् । लिग जित्ने दाउमा रहेको एथ्लेटिकोका लागि ग्रिजमान नै सञ्जिवनी बुटि हुन् । आफ्नो क्लबको फरवार्ड लाइनमा कमजोरी रहेको बताएका उनले लेभान्टेसँगको खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै जित दिलाएका थिए ।
ग्रिजम्यानले ला लिगाको गोलमा पनि.मेस्सीलाई पछ्याइरहेका छन् । ला लिगाको गोलकर्ताको सूचीमा मेस्सी १७ गोलसहित शीर्ष स्थानमा छन् भने ग्रिजम्यान ९ गोलसहित पाँचौं स्थानमा छन् ।
यता असिष्टमा भने उनी मेस्सीभन्दा एक स्थान तल छन् । मेस्सीले १० गोलमा पास मिलाउँदा ग्रिजम्यानले ६ गोलमा असिष्ट गरेका छन् । जारी सिजन ग्रिजमानले उपाधि दौडमा मेस्सीलाई समेत रोकेर अघि बढ्न सक्ने जनाइएको छ ।